Shiinaha ALuminium CNC Qaybaha Wareejinta Soosaaraha iyo Alaab-qeybiye | Walley
Qaybo ka leexday CNC ：
Nalalkayaga 'CNC lathes' waxay awood u siinayaan xawaare sare iyo leexasho tayo sare leh oo ah caagagga iyo biraha labadaba. Nidaamka leexashadu wuxuu u oggolaanayaa joomatari dibedda adag iyo caajis gudaha ah in la soo saaro. Awooddeena leexashada ayaa loo heli karaa hal-mar iyada oo loo marayo soo saarista wax soo saar ee qaybahaaga. Sidoo kale mashiinka isku dhafan-shiidaya oo leh qalab munaarad leh waxqabad sare.
Faa'iidada mashiinka bir-shiidaya
(1) Gaabin silsiladda habka wax soo saarka wax soo saarka iyo hagaajinta wax soo saarka wax soo saarka Rogidda iyo milqaynta isku-dhafka isku-dhafan waxay dhammaystiri kartaa dhammaan ama inta badan habraacyada wax-qabashada hal mar, sidaas awgeedna si weyn u gaabinaysa silsiladda habka wax soo saarka wax soo saarka. Qaabkan, hal dhinac, waqtiga kaalmada wax soo saarka ee uu keenay isbeddelka kaarka rakibaadda waa la dhimay, iyo wareegga waxsoosaarka iyo waqtiga sugitaanka qalabka qalabka ayaa sidoo kale la dhimay, taas oo si weyn u hagaajin karta wax soo saarka wax soo saarka.
(2) Yaree tirada isku haynta iyo hagaajinta saxsanaanta waxqabadka. Hoos u dhigista tirada kaararka la buuxinayo waxay ka hortageysaa iskudarsanaanta khaladaadka sababtoo ah beddelka jaangooyooyinka meelaynta. Isla mar ahaantaana, inta badan qalabka wax-soo-saarka ee isku-dhafan ee wax-soo-saarka ayaa leh hawsha ogaanshaha internetka, taas oo xaqiijin karta ogaanshaha goobta iyo xakamaynta saxda ah ee xogta muhiimka ah ee habka wax soo saarka, taas oo hagaajinaysa saxsanaanta wax soo saarka ee sheyga.
(3) Yaree booska iyo qiimaha wax soo saarka. In kasta oo qiimaha hal unug oo ka mid ah qalabka wax soo saarka isku dhafan ee wax kala beddelayaa uu aad u sarreeyo, sababta oo ah yaraynta silsiladda geedi socodka wax soo saarka iyo yaraynta qalabka loo baahan yahay ee alaabada, iyo sidoo kale hoos u dhaca tirada jadwalka, aagga aqoon isweydaarsiga iyo kharashka dayactirka qalabka, waxay si wax ku ool ah u yareyn kartaa guud ahaan hantida go'an Qiimaha maalgashiga, hawlgalka wax soo saarka iyo maaraynta. “
CNC Machining qaybo jeestay
MAX cnc machining OD oo ah 300X300mm
Qallafsanaanta dusha sare: Ra≤0.1μm
Sax: +/- 0.005mm ~ +/- 0.02mm
Qaabka sawir: PDF, JPEG, AI, PSD
Min xakamaynta dulqaadka ee +/- 0.01mm.
Geedi socodka: Mashiinka mashiinka khaaska ah, Nidaamyada kale waxaa ka mid ah been abuur shaabbad kulul, foojignina la isku cadaadiyay
Sheyga la magacaabay Qalabka Mashiinka CNC
Cabir Cabirrada loo habeeyay
Sax +/- 0.005mm ~ +/- 0.02mm
Codsiga mashiinka maaskaro qalliinka
Shahaadada ISO9001: 2008 ， IATF16949, ROHS
Awoodda Qalabka Aluminium, Naxaas, Naxaas, Naxaas, Biraha Adkaynta, Biraha Qaaliga ah, Bir Da'ay, Birta Daawaha
Nooca Broaching, Drilling, Etching / Chemical Machining, Laser Machining, Milling, Adeegyada Kale ee Mashiinka, Prototyping Rapid, Turning, Wire EDM
Qaab dhismeedka Sii socda
1) Bixinta fiidiyowga iyo sawirrada oo leh faahfaahin si xor ah inta lagu jiro wax soo saarka.
2) Soo saarida iyadoo loo eegayo saxsanaanta sawirada, cabirka isku imaatinka si loo ogaado shaqeynta iyo xakamaynta tayada adag si loo hubiyo 0 heerka soo celinta
3) Amarada 99% waa la hubin karaa waqtiga dhalmada
4) Qalabka aan isticmaalno waa kuwa ugu fiican
5) 24 saac adeegga internetka
6) Qiimaha warshadda tartanka oo leh tayo iyo adeeg isku mid ah
7) Habka ugu habboon ee wax lagu duubo ee alaabada kala duwan.
Hore: EDM Qalabka Mashiinka
Xiga: Qaybo ka mid ah Aluminium CNC Milling
Aluminium Cnc Qaybaha Isbedelaya
Aluminium Cnc Wareejinta Gacanta
Qaybaha Aluminium Cnc
Cnc Aluminium Wareegtay Qaybta
Qaybaha Wareegga Aluminium
Qaybta Aluminium Wareejinta